बरुण भुजेलको भाइ बिरेन भुजेलले भने-बरूण दाज्युलाई बङ्गाल पुलिस र विनय तामाङ मिलेर तड्पाई तड्पाई मारेको हो - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारबरुण भुजेलको भाइ बिरेन भुजेलले भने-बरूण दाज्युलाई बङ्गाल पुलिस र विनय तामाङ मिलेर तड्पाई तड्पाई मारेको हो
‘बरूण दाज्युलाई बङ्गाल पुलिस र विनय तामाङ मिलेर तड्पाई तड्पाई मारेको हो। मेरो दाजुको बिमारीको पत्तो लाग्दासम्म दबाई पानी गरिएन। त्यसको दोष कसलाई दिनपर्ने? जङ्गलबाट आफ्नो छाक काटेर सहिद बरूणलाई बचाउन हरेक प्रयास गर्ने बिमल गुरुङलाई की सत्ताको लोभमा मात्तिएर आफ्नैहरूलाई जेल बन्दी बनाउनेहरूलाई?
कालेबुङ, 23 अक्टोबर
बरुण भूजेलको परिवारले बिनय तामाङलाई सहिद बरूण भुजेलको विषयमा बोल्ने नैतिक अधिकार नै नरहेको बताएका छन्। बरुण भूजेलको पुण्यतिथिलाई विमल गुरुङले शपथ दिवसकोरूपमा पालन गर्ने घोषणा गर्ने वित्तिकै विनय तामाङले पनि बरुण भुजेलको पुण्यतिथिलाई पश्चताप दिवसकोरूपमा पालन गर्ने सुझाव दिएका थिए।
यसेको प्रतिक्रियास्वरूप बरुण भूजेलको परिवारको पक्षमा बिरेन भुजेलले विनय तामाङलाई बरुण भुजेलबारे बोल्ने अधिकार नरहेको बताएका हुन्।
‘बरूण भुजेललाई 15 जुन 2017 को दिन नै कालेबुङमा पक्राउ गरिएको थियो। त्यही समयमा दार्जीलिङमा भएको केस टयाग गरेर 25 अक्टोबर 2017 मा मारियो,’ बिरेन भुजेलले भनेका छन्, ‘उतिखेर बिनय तामाङले जिटीएको सत्ता सम्हालिसकेका थिए। सोही मुद्दा लागेका सतिस पोखरेल जो पछिबाट पक्राउ परेका थिए, उनलाई बाहिर निकालियो। बरूणलाई भित्रै मार्नको निमित्त छोडियो।’
बिरेन भुजेलअनुसार बङ्गाल सरकार गोर्खाल्यान्ड भन्नेहरूको मुख थुन्न अथवा गोर्खाल्याण्ड भन्नेहरूको अवस्था यस्तो हुन्छ भनेर देखाउने उदाहरण स्वरूप बरूणलाई जेलमा मार्न चाहन्थ्यो। यसो गर्नमा बिनय तामाङले बङ्गाल सरकारलाई सहयोग पुऱ्याएका हुन्।
बिरेनले यता अनित थापाले भने आफूहरूलाई सहयोग गर्न चाहेको तर कुनै सहयोग गर्न नसकेको पनि खुलाएका छन्। बिरेनले दावा भोटियालाई पनि सोही कारणले मारिएको बताएका छन्।
‘अब सहिद बरूण भुजेल नै अन्तिम सहिद हुनेछन्। विनय तामाङले 2007 देखि 2017 सम्म विमल गुरुङको नजिक बसेर विश्वासघात गरेका हुन्। मोर्चामा अब उनीजस्ता कोही छैनन,’ बिरेनले भनेका छन्, ‘बरू हामी मर्छौं तर अरूलाई बचाउने छौं। अब पहाडमा कसैको सिउँदो पुछिने छैनन्। नत कोही टुहुरो हुनेछन्। कसैलाई कुनै गरिबको भोको नाङ्गो पेटमा लात हिर्काउन दिने छैनौं, अशान्तिको त गर्ने कुरै आउँदैन। परेर चेतेका छौं।’
बिरेनअनुसार बरूण भुजेलको मुद्दा सर्वोच्च न्यायलयमा सानो गल्तीले गर्दा स्थगित गरिँदा विनय तामाङ खुशी बनेका थिए। बरूण अघिदेखि बिरामी थिए, तर विनय तामाङले रक्सी पिएर मरेको भनेका थिए। विनय तामाङले साँचो योद्धालाई अपमान गरेका छन्।
‘बरूण दाज्युलाई बङ्गाल पुलिस र विनय तामाङ मिलेर तड्पाई तड्पाई मारेको हो। मेरो दाजुको बिमारीको पत्तो लाग्दासम्म दबाई पानी गरिएन। त्यसको दोष कसलाई दिनपर्ने? जङ्गलबाट आफ्नो छाक काटेर सहिद बरूणलाई बचाउन हरेक प्रयास गर्ने बिमल गुरुङलाई की सत्ताको लोभमा मात्तिएर आफ्नैहरूलाई जेल बन्दी बनाउनेहरूलाई?,’ बिरेन भुजेलले विनय तामाङलाई प्रश्न गरेका छन्।
बिरेन भुजेलले विनय तामाङले आफ्न घर कुड्की गराउन सक्ने र आफूलाई पक्राउ गराउन सक्ने भन्दै विस्तारै विनय तामाङको वास्तविकरूप सबैले थाहा पाउँदै जाने पनि बताएका छन्।
‘आफ्नै दाजुलाई धोका दिनेले, जातिलाई धोका दिनेले जे पनि गर्नसक्छन्,’ भुजेलले भनेका छन्, ‘यस्ता व्यक्तिको पछि लाग्नु हुँदैन।’